ISINDEBELE AMANGENISO AVULIWE - Innibos
AmaBhaso oMsebenzi wobuGcisa e-Innibos eSizwe ka-2021: Amangeniso avuliwe
Amangeniso avuliwe kumaBhaso oMsebenzi wobuGcisa e-Innibos eSizwe esihlanu, exhaswa liSebe leSizwe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko (Department of Sport Arts and Culture) (DSAC).
Ukhuphiswano lujolise ekuqaqambiseni icandelo elinodlamko lobugcisa eMzantsi Afrika ngokukhuthaza kunye nokunika imbeko ukugqwesa kwisakhono phakathi kwabo benza imisebenzi enokuveliswa kwakhona kwaye kurhwetywe ngayo ngokulula; kunye nabo abanjongo yabo ikukuyila imisebenzi eyodwa, evuselelayo.
Lwaziswe ngo-2017, olu khuphiswano kunyaka ophelileyo lutsale ngaphezulu kwamangeniso ali-1 300 avela kumagcisa asakhasayo kunye nalawo sezinzile kuMzantsi Afrika wonke. Imisebenzi eyangeniswayo yayiquka imisebenzi yezinto ezinokusetyenziswa kunye nezinto zokuhombisa kwaye yaqaqambisa uluhlu olubanzi lwemathiriyeli esetyenziswe ngamagcisa aseMzantsi Afrika, ukuziqhelanisa kwawo nemizila entshintshayo yabasebenzisi kunye nokukwazi kwawo ukuvelisa izinto ezintsha.
Amabhaso la aququzelelwe nguJohn-Anthony Boerma noJan Bhuda beArtAid Africa kwaye abanjwa ngenkxaso yoMnyhadala wezobuGcisa weInnibos weSizwe.
“Ukusukela kwasekuqaleni, yayiyinjongo yethu ukudala iqonga lamagcisa ukuze aqaqambise imisebenzi yawo kwaye abonise ihlabathi ukuba unetalente engakanani na uMzantsi Afrika. Enye yeenjongo zethu ezingundoqo kukugcina ukhuphiswano luquka kangangoko kunokwenzeka, oko esiye sakuphumeza ngokungabizi mali ihlawulelwa ukungenela kunye nokugcina inkqubo yokungenela ilula kangangoko kunokwenzeka,” utshilo uJan.
Intsebenziswano ye-DSAC namaBhaso obuGcisa eInnibos eSizwe ikhuthazwe ngumnqweno wayo wokukhuthaza kunye nokuvuselela uyilo kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha kwicandelo lobugcisa, oko okunokunceda abantu baphume ekuhluphekeni kwaye basebenzise izandla zabo ukuzenzela impilo.
Iindidi ezine zamabhaso zijolise nangakumbi kwabo bajolise ukurhweba ngemisebenzi yabo. Ezi ndidi zezi:
IZipho zamaQumrhu (izinto ezinokuba nophawu lweklayenti),
Umsebenzi wamaso (owemveli okanye owezinto ezintsha),
Imathiriyeli ebisetyenzisiwe kodwa yalungiswa kwakhona ukuba iphinde isetyenziswe (ingakumbi leyo yenziwe ngemathiriyeli ebisetyenzisiwe/efiunyenweyo), kunye
Nezinto ezizizikhumbuzi (iimemento ezibonisa umtsalane woMzantsi Afrika kubakhenkethi ezinokuveliswa ngobuninzi).
Kuza kuxelwa umntu omnye ophumeleleyo kudidi ngalunye kwaye lowo uphumeleleyo uza kufumana ama-R20 000.
Ukongeza, umntu ophumeleleyo kunye nabo babini bamlandelayo baza kwaziswa kudidi olunye (izinto ezohlukileyo). Amabhaso ngama-R50 000, R20 000 ne-R15 000, ngokwahlukahlukeneyo.
Amangeniso kuzo zonke iinkalo, ukusuka ekolukeni ingca neeseramikhiu ukuya kumsebenzi wamaso, umsebenzi weengcingo, umthi, izacholo, iphepha, ukupeyinta nokushicilela kwilaphu, ukwenza ikwiliti, umsebenzi wesikhumba, iitoti zekopolo, umsebenzi weglasi, ukuhombisa kunye nemisebenzi yobugcisa exubileyo iyamenywa.
Ukuchonga abaphumeleleyo kokugqibela kuza kwenziwa yiphaneli ekhethekileyo yeejaji ezizimeleyo neziziingcali, ngemiboniso ebonwayo kuze ukunikwa kwamabhaso kwenzeke ngoSeptemba.
Okuqaqambileyo kumabhaso alo nyaka libhaso lokuQonda iGalelo lomNtu (Life-time Achiever) eliza kunikwa umzobi wesiNdebele owaziwa ihlabathi lonke uGqirha Esther Mahlangu, othathwa njengelifa lesizwe. Ukusukela ngo-2022, icandelo lobugcisa liza kucelwa ukuba lonyule abo baza kufumana amabhaso okuQonda iGalelo lomNtu balandelayo.
Amagcisa anexesha elifika ezinzulwini zobusuku ngoLwesihlanu, kaAgasti 13, 2021, ukungenela. Kufuneka athathe nje iifoto zamangeniso awo – ecaleni kwebhokisi yematshisi kwisayizi yesikali, kwaye bazithumele ngeimeyile ku-crafts@innibos.co.za okanye bazithumele ku-071 621 3597 nge-MMS okanye nge-WhatsApp. Akukho mali ihlawulelwa ukungenela.
Kukho imiqathango ebekiweyo esebenzayo kwaye enokufunyanwa kwikhasi leFacebook lokhuphiswano – https://www.facebook.com/Innibosnationalcraftawards.
Khumbula ukufaka igama lakho, idolophu ohlala kuyo kunye neenkcukacha zakho zoqhagamshelwano.
Abantu abangeneleyo ekungekho nto bayivileyo kubaququzeleli kwiintsuku ezingama-30 zomhla wokuvala mabathathe ngokuba khange bafikelele kuluhlu olufunyeziweyo ukuze bafikelele ekugqibeleni.
Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uthumele iWhatsApp kuJan Bhuda ku-071 621 3597 okanye uthumele i-imeyile kuJohn Anthony Boerma ku-artaid@lantic.net.
Ukuhlala unolwazi ngamaBhaso obuGcisa eInnibos eSizwe, sithande kwiFacebook: @InnibosNationalCraftAwards uze udibane nathi kwiInstagram: Innibos National Craft Awards.
Ikhutshwe egameni lika: John Anthony Boerma noJan Bhuda
Abaququzeleli bamaBhaso obuGcisa eSizwe
Ikhutshwe ngu: Cathy Grosvenor
Abaququzeleli abangabanye bePremier bamaBhaso obuGcisa eSizwe